Rooble oo ku baaqay in dadkii barakacay ay soo laabtaan | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Rooble oo ku baaqay in dadkii barakacay ay soo laabtaan
Rooble oo ku baaqay in dadkii barakacay ay soo laabtaan
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa ugu baaqay dadkii ka barakacay dagaaladii kajiray Magaalada Muqdisho inay dib u soo laabtaan.
Qoraal kooban oo kasoo baxay Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa la faray Ciidamada Amniga inay dadka u fududeeyaan inay guryahooda iyo goobahooda Ganacsi kusoo laabtaan
“Waxaan ugu baaqayaa dadkii ku barakacay qalalaasihii maalmahan ka jiray Muqdisho in ay guryahooda ku soo laabtaan. Ciidammada waxaan farayaa in ay shacabka u fududeeyaan in ay guryahooda iyo ganacsiyadooda ku soo noqdaan. Waxaa naga go’an in shacabkeennu helaan nabad iyo xasillooni.
Maxamed Xuseen Rooble Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta ayaa horay u shaaciyay in uu aad uga xun yahay khalalaasihii ka dhacay Magaalada Muqdisho, isaga oo Ciidamadii ku dagaalamay Muqdisho ku amray inay Saldhigyadooda ku laabtaan.
Labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxaa xaalad kacsanaan ah kajirtay Magaalada Muqdisho, kadib markii meelo kamid ah ku dagaalameen Ciidamada dowladda iyo kuwa kasoo horjeeday muddo kororsiga, kuwaas oo xaafadaha qaar dhufeysyo ka sameystay, taas oo keentay inay dad farabadan barakacaan.